ဘာသာစကားတစ်ခု ပျောက်ဆုံးခြင်းသည် တိုင်းပြည်တန်ဖိုးရှိသော ရတနာတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ဝ
ဘာသာစကားတစ်ခုပျောက်ဆုံးခြင်းသည် တိုင်းပြည်၏တန်ဖိုးရှိသော ရတနာတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားသည်။ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်က ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ (ရန်ကုန်) ၏ ”ထာဝစဉ်မမေ့ မွန်မှုဓလေ့” ပွဲတွင် အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ”တိုင်းရင်းသာစာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုတာ အလွန်တန်ဖိုးကြီးမြတ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာ တွေ ပျောက်ဆုံးမသွားအောင် ကျွန် တော်တို့နိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြပါတယ်။ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေရှိပါတယ်။ တူညီမှုတွေရှိတာတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကို ကျွန် တော်တို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသွားပြီး ယဉ်ကျေးမှု တွေအားလုံး ရှင်သန်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခု ပျောက်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင် တိုင်း ပြည်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ရတနာတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တချို့တိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှုများသည် လူနည်းစုပြောစကားများသာဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ”ကျွန် တော်တို့နိုင်ငံမှာ တချို့တိုင်းရင်း သားစာပေယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း လူနည်းစုပြောစကားအဖြစ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီစကားမျိုးတွေ ဖြစ်မသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် စာပေယဉ် ကျေးမှုအသင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီး တော့ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား တွေကို စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါမယ်။ စာအုပ်စာပေဖြန့်ချိ ထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ နောင်လာ နောက်သား တွေက မွန်တိုင်းရင်းသား၊ မွန်ယဉ် ကျေးမှု၊ မွန်ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ် အလာတွေကို သိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ဒီယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေကို ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့စိတ်ကို မွေး မြူပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးများသည် မွန်တိုင်းရင်းသား အများဆုံးနေထိုင်သည့်ဒေသများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးနိုင်သက်လွင်က ”ကိုယ့်အမျိုး၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ နောင်လာမယ့်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပျောက်ပျက်အောင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့၊ အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ကြ အောင် ဝိုင်းဝန်းစည်းရုံးပါ။ နောင်လာမယ့်လူငယ်တွေကိုလည်း စည်းရုံးပါ”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါပွဲကို တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးနိုင်သက်လွင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ မွန်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ (ရန်ကုန်) မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပေါင်မြို့နယ် ဇင်းကျိုက်မြို့မှ ကန်တော်မင်္ဂလာ အတွင်းရှိ ငါးများ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေဆုံး??
ဒူဘိုင်းမြို့ဖျော်ဖြေပွဲအတွက် ကေပေါ့အဖွဲ့များ ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ